Qoorqoor Wisil maka difaaci doonaa Al-Shabaab? | KEYDMEDIA ONLINE
Qoorqoor Wisil maka difaaci doonaa Al-Shabaab?
Al-Shabaab, waxa ay laba jibbaareen dhul ballaarsiga ay ku hayaan Gobolka Mudug, waxayana weerar xooggan ku qaadeen 2 July 2021, degaanka Wisil, halkaas oo ay ku geeriyoodeen ku dhawaad 30 ruux oo dadka degaanka ka mid ahaa.
WISIL, Soomaaliya – Wararka ka imaanaya gobolka Mudug, gaar ahaan degaanka Wisil, ayaa sheegay in Kooxda Al-Shabaab ay degeen tuulooyinka hoos taga degaanka, waxaa la soo warinayaa cabsi xooggan oo laga qabo in Wisil, ay gasho gacanta Kooxda xirirka la leh Al-qaacida.
Wasiirkii hore ee Amniga Galmudug, Axmed Macallin Fiqi, oo ka mid ah dadka sida weyn ugu dhuunduleela dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab ee degaannada Maamulkaas, ayaa sheegay in hareeraha Wisil ay dhaqdhaqaaq ciidan oo xoog leh Al-Shabaab ka billaabeen.
“Wisil iyo agagaarkeeda kooxaha argagixisadu waxay ka wadaan dhaqdhaqaaq culus oo ay ku doonayaan in ay deegaanno hor leh qabsadaan, shacabkana ku dhibaateeyaan”. Ayuu iri Fiqi.
Madaxweynaha Galmudug Qoorqoor iyo Taliyaha Ciidanka Xoogga Odawaa, ayuu ugu baaqay in xooggii, xoolihii iyo abaabulkii ciidan ee ay ku bixiyeen Guriceel, mid la mid ah Wisil uga difaacaan Kooxda duullanka ku ah ee Al-Shabaab.
Suurtagal ma ahan Qoorqoor in uu yiraahdo marka dadka degaankaas ay arrintaas ugu wacaan “is difaaca“! Ayuu sidoo kale yiri Wasiirkii hore ee Amniga.
Fiqi, wuxuu sheegay in shacabka Galmudug ay sugayaan talaabada uu arrintaan ka qaado Qoorqoor, isla-markaana looga fadhiyo inuu in uu gurmad ciidan bixiyo si la isaga difaaco Al-Shabaab.
Qoorqoor, ayaa ciidan xooggan oo ka tirsan CQS u adeegsaday Kooxda ASWJ, ee billowgi bishaan qabsaday Guriceel, waxaana laga filayaa in tallaabo ceynkaas ah uu ka qaado Al-Shabaabka duullaanka ku ah Wisil.